समृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहाकारसंग अन्तरक्रिया – Enayanepal.com
समृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहाकारसंग अन्तरक्रिया
प्रदेश नं. ६ को समृद्धिका लागि उत्तरी नाका खोलिने
सिद्धपाइलामा हिल स्टेशन स्थापना गरी केवुलकार संचालनको प्रस्ताव
विद्युतीय रेलको योजना,
पूर्वपश्चिम जल यात्रा परियोजनाको तयारी
प्रदेश नं. ६ मा सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकता दिइने
सुर्खेत, चैत्र ११ । अर्थमन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीले दिगो र छिटो विकासमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताएकाछन् ।
सुर्खेतको उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना गरीएकोे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सल्लाहकार रेग्मीले ६ नम्बर प्रदेशको विकासको लागि सबै एकढिक्का भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको समयमा देश प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउदै उनले स्थानीयस्तरको सरकारको जग बलियो बनाउनुपर्ने बताए । अब आर्थिक समृद्धिको आधार नै स्थानीय तह हुने भन्दै उनले निर्वाचन सम्पन्न गराएर सबै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
अबको आर्थिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा रहेको सरकारले दीगो विकासमा जोड दिनुपर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी भएको रेग्मीले बताए । उनले ६ नम्बर प्रदेश पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले विभिन्न खालका सम्भावना भएको बोकेको प्रदेश भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
प्रदेश नम्बर ६ मा विकासका सम्भावनाहरु धेरै भएकाले श्रोतको पहिचान गरी प्रदेश नम्बर ६ कोे आर्थिक समृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । यहाँ रहेका विभिन्न जिल्लाहरु दक्षिणतर्फको भारतसँग नभई उत्तरीतर्फको चीनसँग जोडिएकाले उत्तरी नाका खोल्न पनि पहल चाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले यस क्षेत्रमा रहेका नदीनालामार्फत विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सरकारले तयारी गरिरहेको भन्दै पर्यटकीय क्षेत्रहरुसँग जोड्ने सुरुङ्ग खन्ने सम्भावना पनि बलियो रहेको बताए । नागरिकहरुले कृषि योग्य जमिनमा ढङगले मनपरी घडेरी बनाउने गलत प्रवृतिले गर्दा कृषियोग्य जमिन नाश हुँदै गएकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गरे ।
सल्लाहाकार डाक्टर रेग्मीले यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि टनेल निर्माणको सम्भावना खोजी गरी काम गरिने बताए । नेपाल सरकारले सन २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति गरीब देशको सुचीबाट एक स्थान माथी उकाल्ने उदेश्य राखेको बताउदै त्यसै उदेश्य अनुसार नेपाल सरकारले अथैतन्त्रका ३ वटा खम्बाहरु निजी, सरकारी र सहकारी अनुसार समावेसी विकासको कल्पना गरीएको बताए । प्रस्ट खालको आर्थीक निती बनाउने भन्दै अर्थमत्रालयले ९ सदस्यीय निर्देशक समिती र प्रावीधिक समिति बताएको बताउदै प्रत्येक प्रदेशमा गएर प्रावीधिकहरुले काम गरिरहेको बताए ।
त्यस्तैगरी अन्तरक्रियामा विरेन्द्रनगर नगरपालीकाका कार्यकारी अधिकृत विमल राज आचार्यले आर्थिक गतिविधीलाइ सगै जोडेर स्थानिय स्तरमा सबैले सहकार्य गरेर अघि बढेमा सफल हुने बताए ।
कार्यक्रममा सुुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताउदै सबै व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले करिब ९२ प्रतिशत व्यवसायीहरुले ज्ञान हाँसील नगरेको भन्दै यस क्षेत्रको विकासमा अँझै धक्का पुगेको बताए ।
उनले प्रदेश नम्बर ६ को लगानीमा जोखिम रहेको क्षेत्र भएको भन्दै उहाँले आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैबिच, उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न २० बुँदे मागपत्र सल्लाहाकार डाक्टर रेग्मीलाइ बुझाएको छ ।
रत्न राजमार्ग दुइ लेन बनाउनु पर्ने र सुर्खेत दैलेख, कालीकोट,जुम्ला हँुदै मानसरोवर जोड्ने सडकलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने, प्रत्येक जिल्लामा औधोगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने, सुर्खेत लगानी वर्ष २०७३ द्धारा प्रस्ताव गरीएको ठुला लगानीका क्षेत्रहरुमा राष्टिय तथा अन्तराष्टिय लगानी भित्र्याउने तर्फ नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने, पश्चिम सुर्खेतको लखरपाटा तथा सल्यानको गजेरी सिमेन्ट कारखानाको काम सुरु गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै सुर्खेतलाई प्रदेश नं. ६ को राजधानि स्थापना गर्नका लागि सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्र्नुपर्ने, प्रदेश स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, शिद्धपाइला हिलस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, सुर्खेतमा अनतराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, साटाखानीमा प्रस्ताव गरिएको एक विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश नं. ६ को लगानी सम्भावनालाई ध्यान दिई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।